आज प्रेम दिवस, हेर्नुस् कुन राशिको प्रेमफल कस्तो ? - JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
आज प्रेम दिवस, हेर्नुस् कुन राशिको प्रेमफल कस्तो ?
ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रेम । कुन राशिका व्यक्ति प्रेमका मामला कस्ता हुन्छन् त? आज हामी यस भिडियोमा यसै विषयमा केन्द्रित रही विशेष कुराकानी गर्नेछौँ ।
मेष : मेष राशि भएका व्यक्तिहरू प्रेमका लागि सधैँ व्यग्र हुन्छन् र प्रम प्रदर्शन गर्दा पनि अलि उग्र हुनेगर्छन् । उनीहरूलाई आफ्नो भावना व्यक्त गर्न नपाउँदा साह्रै पीडा हुन्छ । मेष राशि भएका व्यक्तिहरूमा पहिलो नजरमा नै प्रम उत्पन्न हुनसक्छ तर त्यो प्रेमको भावना छोटो समयका लागि मात्र रहनसक्छ ।
वृष :वृष राशिका व्यक्तिहरू दिमागको भन्दा दिलको आवाज बढी सुन्ने हुन्छन् । वृष राशिको स्वामी ग्रह शुक्र हो । जुन ग्रहलाई प्रेम र शारीरिक सुखको कारक ग्रह पनि मानिन्छ । वृष राशिलाई प्रेमि राशि पनि भन्ने गरिन्छ । प्रेमको मामलामा दिमागको भन्दा दिलको आवाज बढी सुन्ने गर्छ वृष राशिका व्यक्तिहरू ।
मिथुन : मिथुन राशिका व्यक्तिहरू एकसाथ धेरै सम्बन्ध राख्न रुचाउँछन् । मिथुन राशिको चिन्ह नै स्त्री पुरुषको मिलन दर्साएको छ त्यसैले आफ्नो निकटमा रहेका विपरित लिगलाई आकर्षित गर्ने यिनीहरूको अनौठो कला हुन्छ ।
कर्कट : कर्कट राशिका व्यक्तिहरू पार्टनरसँग मनमोजी बन्दछन् । कर्कट राशिका स्वामी ग्रह चन्द्रमा हो र ज्योतिषमा चन्द्रमालाई मनको कारक मानिन्छ । त्यसैले कर्कट राशिका भएका व्यक्तिहरू सधैँ नै दिलबाट प्रम गर्ने खालका हुन्छन् ।